ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: November 2009
Management တဲ့ …. သဘောကျချင်စရာ၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဒီစကားလုံးကို ကျွန်မသိပ်သဘောမကျချင်တော့ဘူး …. တကယ်တော့ Management ဆိုတာအလုပ်တစ်ခုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ပြီးမြောက်စေဖို့ Process တစ်ခုပဲဖြစ်သင့်ပါတယ် … ရေဗူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူး ရေပါတာပဲလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ အမိန့်တစ်ခုလိုမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးလေ ….
ကျွန်မတို့အလုပ်က Management ဆိုသူတွေရဲ့ ကောင်းကွက်လေးတွေသိသလောက်ချရေးကြည့်ချင်သားလား ….
ကျွန်မရဲ့အထက်လူကြီးကပြောတယ် “ငါ ဘာ အယ်ရာမှ မလိုချင်ဘူး” တဲ့ … မသိရင် ကျွန်မကပဲ အယ်ရာတွေကို ချစ်လွန်း၊မြတ်နိုးလွန်းလို့ လုပ်ယူနေသလားပဲ … ကျွန်မလဲ ပြန်ပြောလိုက်တယ် … “နင်မလိုချင်သလို ငါလဲမလိုချင်ပါဘူး” လို့ …
စနေ၊တနင်္ဂနွေ အလုပ်မလုပ်စေချင်ပါဘူး ဆိုပြီး တနေ့ အလုပ်ချိန် ၈ နာရီစာမကတဲ့အလုပ်တွေကို ပြီးစေချင်တယ် …. တော်ပါတယ် သူတို့လုပ်ပုံ …
ပလန်လုပ်တယ်တဲ့ … ပလန်လုပ်တယ်ဆိုတာ ရှိနေတဲ့အလုပ်နဲ့မျှတတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်သင့်တာပေါ့ …. ခုတော့ အချိန်ကိုညှိလို့ရတယ်တဲ့ ဒါပေမယ့် ရက်ထပ်မတိုးရဘူးတဲ့ ….. ကျွန်မ ထပ်ပြောစရာ စကားမရှိတော့ဘူးလေ … အင်းလို့ မပြောလို့မှမရတော့လဲ အင်းပေါ့ …. မပြီးသေးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ ပလန်ကို ပြောပါတဲ့ … ကျွန်မပြောလိုက်တယ် … တစ်ရက်မှာ ၂၄ နာရီပဲရှိတာ … ငါ ဒီအလုပ်အတွက် ၁၀ နာရီ နဲ့ ၁၂ နာရီကြားအချိန်ပေးထားတာလို့ဆိုတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ် …ကျွန်မ ဒီလောက်ပဲတတ်နိုင်တယ် …. ကျွန်မအစွမ်းကုန် အကောင်းဆုံးလုပ်ထားတာပဲလေ …. ခန်းမှန်းခြေအချိန်ကိုပဲပေးလို့ရတဲ့ကျွန်မတို့အလုပ်မှာ ရက်အတိအကျတောင်းရုံတင်မဟုတ်ပဲ နာရီအတိအကျပါလာတောင်းတော့ ကျွန်မစိတ်တိုလာရော …. အိုင်တီအလုပ်မှာ အဖွဲ့နဲ့လုပ်လေ တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်မှီတည်နေတဲ့ကိစ္စတွေကများလေပဲဆိုတာ သူလဲသိရဲ့သားနဲ့ … ပြီးတော့ သုံးလအချိန်ယူထားတဲ့ပရောဂျက်တစ်ခုကို အချိန်လျော့စေချင်တယ် … သူကနည်းနည်းလေးလျော့ခိုင်းချင်တာနဲ့ ကျွန်မဘော့စ်က လျော့ပေးမယ်ဆိုတာချည်းပဲ … နောက်လူတွေကိုထည့်မတွက်ဘူး … ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားလဲ မစဉ်းစားဘူး …. Complaint ဘယ်လောက်တက်တက် နောက်ဆုံးတော့လဲ အထက်လူကြီးသဘောပဲ …
မဖြစ်နိုင်လို့ ကိုယ်တွေက ပိတ်ရက်တွေပါအလုပ်လုပ်ရပြီဆိုရင် လျော့ခိုင်းတဲ့လူကြီးက မင်းတို့ဘာလို့ ပိတ်ရက်တွေအလုပ်လုပ်သလဲတဲ့ … ဒီလိုလုပ်တာတောင် ထွက်လာတဲ့ Result ကျတော့ တူတူပဲတဲ့ … Result ကို သူဘာနဲ့တိုင်းသလဲတော့မသိဘူး .. သူ့အတွက်တော့ ကိုယ်တွေကို အချိန်လျော့ခိုင်းလို့ရလေ .. .သူက နာမည်ရလေပဲ ….
ဒီတော့ Management ဆိုတာ ကျွန်မအတွက်တော့ လူတွေကိုကျပ်တဲ့ Process တခုလို့ပဲလို့မြင်လာတော့တယ် ….
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:55 PM 10 comments Links to this post